Ahoana ny fomba hamoronana profil-rindrambaiko mandresy lahatra?
Maro ny hevi-diso ao amin'ny indostrian'ny fanorenana rohy izay tena tsotra ho an'ny indostrian'ny varotra dizitaly. Na firy taona maro iainanao iainana eto amin'ity sehatra ity, tsy ho fantatrao velively hoe ahoana no iarahan'i Google ny tranonkalanao ary inona no hataon'ity rafitra fikarohana ity amin'ny manaraka. Ny mpamorona Google sy ny webmaster ihany no afaka mahafantatra izany tsara. Tsy maintsy mampiasa ny antontam-baovaontsika isika sy ny traikefantsika mba hizarantsika ny fikajiana ny habaka.
Misy fanambarana mahazatra sy hevitra vaovao momba ny profiles sy backlinks. Andeha hodinihintsika ny tena mahazatra azy ireo:
Ny rohy "Rel = nofollow" dia tsy manome valiny
"Rel = nofollow" rohy ary aza avela misy jiosy mifandray amin'ny alalan'izy ireo - sport court surfaces md. Misy adihevitra maro momba ny lanjan'ny rohy nofollow. Ny sasany amin'ireo webmasters dia milaza fa tsy ilaina ny mamorona rohy toy izany, fa ny hafa kosa milaza fa ny sandan'ny dololles dia mety hohajaina. Raha ny hevitro dia tsy misy valiny mazava ho an'ity fanontaniana ity satria mety hiankina amin'ny lanjany ny lanjany. Ireo rohy tafiditra ao ireo dia tsy mandray anjara amin'ny endriny samihafa. Ohatra, raha manomboka tranonkala iray isika ary mampanan-karena azy amin'ny isan'ireo hatsarana PR "nofollow". Vokatr'izany dia tsy hitazona tampoka ny antontanisa momba ny fifamoivoizana ianao. Heveriko fa manao asa tsara i Google amin'ny fahazoan-dàlana "nofollow" amin'ny resaka.
Na dia izany aza, ilaina ny manonona faritra sasantsasany izay misy fiantraikany lehibe amin'ny rohy nofollow eo amin'ny toerana misy ny tranonkala sy ny manam-pahefana rehetra. Ireo sehatra ireo dia ahitana tranokala maherin'ny fandefasana, rohy momba ny backlink izay ahitana rohy "nofollow" ary rehefa ovaina ny solo-endritsoratra. Ireto faritra manaraka ireto dia manana profil safidy hafahafa. Mety misy antony maro samihafa toy ny fihetsiketsehana spammy na programa afiliana.
Nampiasa tranonkala nofolo aho tamin'ny fombako, niezaka ny naka azy ireo avy amin'ny loharanom-baovao avo lenta tamin'ny endrika fanehoan-kevitry ny blaogy, rohy, famoahana editoriales ary teknolojia fanorenana hafa. Vokatr'izany dia nahazo rohy tsara amin'ny serivisy "rel = nofollow" aho. "Nitondra fampiofanana maherin'ny 100% tao anatin'ity rohy ity ireo rohy ireo.
Izany no antony ahafahako milaza fa ny backlinks nofollow dia mety hitondra ny lanjany eo amin'ny tranokalanao. Na izany aza, zava-dehibe ny nahazoana azy ireo. Ny fikarakarana organic organic nofaly dia miasa tsara mba hanatsarana ny ratios amin'ny rohy mihoatra ny optimisma.
Moa ve ny lanjany?
Raha nangataka ahy ity fanontaniana ity vao haingana taorian'ny famoahana Google Penguin ahy dia ho nijery anao tamim-piraiketam-po aho tamin'izany fotoana izany fa ny olona rehetra dia nitady ny hatsaran'ny fifandraisana. Na izany aza, tamin'ny andalan-taonan'ny fotoana dia niova ny fanamafisana. Amin'izao fotoana izao, tranonkala maro no mamoaka loharanom-baovao hafa na dia manana rohy malaza aza izy ireo ary manana rohy tsy hita isa avy amin'ny pejy miresaka. Izany no mahatonga ireo tranonkala manana backlinks maro dia mety manana ny sisintany amin'ny hafa izay manana rohy malemy vitsivitsy. Tao anatin'izay taona lasa izay dia nahita fifandraisana goavana tamin'ny isan'ny backlinks izahay, fa tsy ny kalitaon'izy ireo ihany, izay mahakasika ireo mpilalao lehibe indrindra amin'ny lozam-pokonolona ao amin'ny toerana ambony.
Ankoatra izany, dia mety ho hafahafa ihany izy io, nefa mbola afaka manampy anao ihany koa ny rohy maromaro avy amin'io sehatra io, ary i Google aza dia mahasoa azy io. Tsy mampaninona anao ny mahazo sazy ary mety handray soa avy amin'izany aza. Ankoatr'izay, ny totalin'ny backlinks any ivelany dia mety hanome ny ezaka SEO anao satria izy io dia singa lehibe mifototra. Ny webmasters koa dia miantso ity rohy fananganana tranokala ity "haingam-pifandraisana. "